आर्थिक विकासमा पर्यटन उद्योग - Karobar National Economic Daily
query_builderDecember 27, 2016 8:33 AM supervisor_accountउदय रानामगर visibility1383
आर्थिक विकास, सामाजिक एकीकरण र आबद्धताको माध्यम पर्यटन हो । विभिन्न अध्ययनले आर्थिक वृद्धि र पर्यटन उद्योगबीचमा सकारात्मक सहसम्बन्ध रहेको देखाएको सन्दर्भमा नेपालले पनि यस उद्योगको विकास र विस्तार गरी आर्थिक वृद्धि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कुल वैदेशिक व्यापारमा सेवा व्यापारको योगदान ५२ प्रतिशत रहेको परिप्रेक्ष्यमा पर्यटन उद्योगको हिस्सा ठूलो रहेको देखिन्छ । यहाँ रहेको अद्वितीय प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा नै पर्यटन विकासका प्रमुख आधार हुन् । तर, यस क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन, जसका कारणले यो क्षेत्रबाट आशातीत रूपमा उपलब्धि हासिल भएको छैन ।
यसमा रु. १ खर्च गरेर रु. ६० सम्म आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना छ । नेपालमा आउने पर्यटकको बसाइ औसत १२.५७ दिन बस्ने र प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ४२.८ अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गरिरहेको छ । छिमेकी मुलुक भुटानमा प्रतिदिन प्रतिपर्यटक २ सय अमेरिकी डलर खर्च छ । त्यसमा पनि धार्मिक पर्यटकहरू करिब ४० प्रतिशत रहेको र अधिकांश भारतीय नै हुने गरेकाले पर्यटक खर्च कम भएको हो ।
नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न तथा विश्वमा चिनाउनका लागि विविध प्रकारका प्रयास नभएको होइन । नेपालको संविधान, बहुवर्षीय योजनाहरू, पर्यटन नीति, वार्षिक बजेट र टुरिजम भिजन–२०२० ले समेत आन्तरिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनको विकासमा जोड दिएको छ ।
पर्यटन पूर्वाधारहरू होटल, रिसोर्ट, मनोरञ्जनपूर्ण खेलजस्ता क्षेत्रको विकास पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्नु, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न गुरुयोजना नहुनु, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरूको पर्याप्त मात्रामा बजारीकरण नहुँदा पर्यटनले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो ।
पर्यटन क्षेत्रका साझेदार एवं लगानीकर्ताहरू पर्यटन विकासभन्दा प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा संलग्न हुँदा यस क्षेत्रको विकास हुन सकेन, स्थानीय निकायको संलग्नतामा पर्यटनसम्बन्धी नीति तय गर्न नसक्दा स्थानीय निकायले पर्यटनसम्बन्धी नीतिमा अपनत्व लिएनन् र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्यो ।
पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न निकायहरू सडक, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानीसँग समन्वयात्मक रूपमा क्रियाकलाप सञ्चालन हुन सकेन र नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
आव ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत आन्तरिक पर्यटन वर्ष वि.सं. २०७३ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरी ‘राष्ट्रवादी रोजगार’ भन्ने कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन हुँदै आएको छ, तर पनि यस क्षेत्रका उद्योगको विकास र विस्तार गर्न यहाँ रहेका समस्याहरूको समाधान गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ ।
नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको खोजी गरी त्यसको विकास र विविधीकरण गर्नुपर्छ । पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्न सके यस क्षेत्रमा लगानी बढाउँछ । पर्यटन उद्योगलाई ग्रामीण तहसम्म विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनमार्फत संख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि गरी प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गरिनुपर्छ । पर्यटकीय सेवा तथा सुविधाहरूको विकास, विस्तार एवं विविधीकरण गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यापर्यटनमा जोड दिनुपर्छ ।
नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत संख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि गरी प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गर्नुपर्छ ।
पर्यटकीय सेवा तथा सुविधाहरूको विकास, विस्तार एवं विविधीकरण गरिनुपर्छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न छिमेकी देशहरू चीन तथा भारतलाई केन्द्रित गरी व्यापक रूपमा प्रचार–प्रसार गर्नु आवश्यक छ । पर्यटकहरूलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधाको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दै दिगो पर्यटन विकासको कार्यलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ ।
पर्यटन उद्योगको विकास पर्याप्त मात्रामा गर्न सके नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई विकासको गतिविधिमा समेत बढोत्तरी हुन जान्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, तथा गैरसरकारी क्षेत्रसमेतको संयुक्त लगानी, तत्परता र सोचमा परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ ।
यसो हुन सकेको खण्डमा नेपाल विश्वमै आकर्षक पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास हुन जाने र जनताको जीवनस्तरमा समेत सुधार हुन जान्छ । यसका साथै यहाँ रहेका सम्पदाहरूको संवद्र्धन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी पर्यटक आगमन, पर्यटक बसाइ र खर्चमा वृद्धि गराई विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीका अवसरको सिर्जनाबाट पर्यटन क्षेत्रको माध्यमद्वारा आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न जान्छ ।
तर, त्यसका लागि यहाँ छरिएर रहेका प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र संवद्र्धनमा स्थानीय निकाय, समुदाय तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागिता आवश्यक पर्छ । साथै, पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी प्राप्त प्रतिफललाई न्यायोचित तरिकाले वितरण गर्न संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयनसमेत गर्नुपर्छ ।
यसका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान तथा पूर्वाधारहरूको विकास गरी कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ । यसका अतिरिक्त आन्तरिक पर्यटनले अहिले पनि कुल पर्यटन उद्योगको ८० देखि ८२ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा समेत लाग्नुपर्ने देखिन्छ । तर यसका लागि सरोकारवालाहरूमा विद्यमान नीतिको कार्यान्वयनप्रति इमानदारीको खाँचो देखिन्छ ।
पर्यटन आर्थिक विकास